IHalloween eBrazil: usuku Lwabathakathi | Ukuhamba kwe-Absolut
IHalloween eBrazil: usuku lwabathakathi
Daniel | | Kubuyekezwe ngomhla ka- 02/10/2020 11:55 | Brasil
Isiko le Halloween, eligujwa ngobusuku bango-Okthoba 31, ligxile kakhulu emazweni athile angama-Anglo-Saxon njenge I-United States, i-Ireland, i-United Kingdom o Canada. Kepha iqiniso ukuthi namuhla lobu busuku obesabekayo bugujwa cishe kuwo wonke umuntu, naku- Brasil, lapho kwaziwa khona ngokuthi I-Halloween (O Usuku lweBruxas).
Njengoba kwenzekile kwamanye amazwe amaningi ngesiko lamaKhatholika, lo mkhosi ongenisiwe uye wangena esikhundleni semikhosi yakudala ye Usuku Lwemiphefumulo Yonke Novemba 1. IBrazil ibingeyona eyehlukile. Endabeni yakhe, kube nezakhi ezimbili eziyisisekelo eziholele ekwandisweni kwe- "I-Halloween yaseBrazil" eminyakeni engamashumi amabili edlule: ngakolunye uhlangothi, ukusatshalaliswa kwalo mkhosi yizikole zezilimi ezingxenyeni ezahlukene zezwe; futhi ngakolunye uhlangothi, umoya wokujabula nowenjabulo wamaBrazil, uhlala ukulungele ukuphuma ukuyodansa futhi ube nesikhathi esimnandi noma ngabe yisiphi isizathu.
1 Umsuka wephathi le-Halloween
2 Lugujwa kanjani usuku lwabathakathi eBrazil?
3 Usuku lukaSaci, i-Halloween yaseBrazil
Umsuka wephathi le-Halloween
Ngaphambi kokuqhubeka nokuchaza izici ze-Halloween noma i-Halloween ngesitayela saseBrazil, kufanelekile ukukhumbula lokho imvelaphi yaleli qembu futhi bekuyini ukuvela kwayo kuze kube namuhla.
Kufanele ubuyele emuva eminyakeni engaphezu kwezinkulungwane ezimbili ngesikhathi. I- abantu abangamaCelt owayehlala ezwenikazi lase-Europe wayejwayele ukugubha umkhosi obizwa ngokuthi uSamhain, uhlobo oluthile lwenkokhiso kunkulunkulu wabafileyo. Kukholakala ukuthi lo mkhosi wobuqaba wawuthatha izinsuku ezimbalwa (njalo ngo-Okthoba 31), njalo ngemuva kokuqedwa kwesivuno.
Ngokusho kwezazi-mlando, ukusakazeka kobuKristu kwasula iminonjana yeSamhain ezwenikazi elidala, yize leli siko lasinda ezindaweni ezithile ezingaphansi kwamaRoma njengaseBritish Isles. Emzameni wokuvumelanisa le migubho nekhalenda lobuKristu, iSonto lakhetha ngekhulu lesi-XNUMX ukushintsha usuku lokugubha usuku lwe- Zonke Usuku LwabaNgcwele. Ngakho-ke, lo mgubho wasuka ekubanjweni ngoMeyi 13 kuya kuNovemba 1, wahlanganiswa neSamhain.
Igama elithi Halloween livela ezilimini zasendulo zamaJalimane. Kuyinhlanganisela yamagama athi "saint" kanye "eve".
Uphawu lwayo olwaziwa kakhulu yi- ithanga, okuthelwa futhi kuhlotshiswe ukukhanyisa ikhandlela ngaphakathi. Ngokwesiko, lokhu kukhanya kusetshenziselwa khanyisa indlela yabafileyo. Lokhu kwavela kunganekwane yakudala yase-Ireland ye- UJack O'lantern, umuntu omphefumulo wakhe wamukelwa hhayi ezulwini noma esihogweni ngemuva kokufa kwakhe. Ngakho-ke, ubusuku beSamhain babonakala bezulazula bengahlosile bephethe ikhandlela.
Lugujwa kanjani usuku lwabathakathi eBrazil?
Ngoba ithonya lamasiko lefilimu nethelevishiniI-Halloween ikoloni ingxenye enkulu yeplanethi engaphandle kwe-Anglo-Saxon sphere. Kunezingane eziningi ezivela ezingxenyeni ezahlukene zomhlaba abathi ngalobobusuku bagqoke futhi bangene endlini ngendlu bememeza "Ukukhohlisa noma Ukwelapha" (Iqhinga noma into emnandi ngesiNgisi) ukuqoqa amaswidi namaswidi.
Leli siko lezingane elihambahamba ezindaweni eziseduze alijwayelekile kakhulu eBrazil, lapho i-Halloween ihlala khona njengosuku lwe amaqembu ezindikimba kubantu abadala nezingane.
Indikimba enkulu yalezi zinhlangano ukwesaba nezwe elingaphezu kwamandla emvelo. Abantu bagqoka njengoba abathakathi, amathambo, ama-vampires noma ama-zombies. Kugcizelelwa ngokukhethekile ukwakheka, kwesinye isikhathi ngokweqile. Inhloso ukuthola ukubukeka okwesabekayo okungenzeka.
Imibala emnyama, ewolintshi nebubende idlala indima ebalulekile ekuhlobiseni imikhosi ye-Halloween. Vele, izimpawu ezibhekise emkhosini owaziwa yibo bonke akufanele zilahleke: amathanga adumile lapho kudonselwa khona ubuso obubi, abathakathi, amalulwane, ama-spider webs, izipoki, izingebhezi, amakati amnyama ...
Usuku lukaSaci, i-Halloween yaseBrazil
Emazweni amaningi ukwanda okunganqandeki kwe-Halloween kuye kwaba usongo ezindleleni zakudala. EBrazil, izwe elinenkambiso ende yamaKhatholika, baningi abathi, ngokubona lokhu ngamehlo amahle kakhulu, banquma "ukuzilwela."
UDia do Saci, enye indlela yokugubha i-Halloween eBrazil
Ngakho-ke, ngonyaka we-2003 i-Federal Law Project yamukelwa, eyabeka isikhumbuzo se- Usuku lweSaci Okthoba 31. Umqondo bekungukuthi ngandlela thile ulwe nempumelelo ye-Halloween ngokusebenzisa isibonakaliso esifanekisayo esivela kumlando waseBrazil: Saci.
Ngokomlando, I-Saci-pererê Ungumfana omnyama okhaliphe kakhulu ohlale efake ikepisi elibomvu. Isici sakhe esiyinhloko somzimba ukuthi ulahlekile emlenzeni, ukukhubazeka okungamvimbeli ekwenzeni zonke izinhlobo zamahlaya nokwenza okubi.
Njengokuhlukile kwe-Halloween ne-Halloween, izikhungo zaseBrazil zikhuthaza zonke izinhlobo zemisebenzi ehlobene nalesi sibalo esidumile. Ngaphandle kwalokhu, basembalwa abantu baseBrazil abagubha iSaci Day.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » IHalloween eBrazil: usuku lwabathakathi
I-Beaver, isilwane sesizwe saseCanada
Amasiko abesifazane baseShayina